Nagarik Shukrabar - छवि–शिल्पाको तमासा
छविको वैवाहिक यात्रा नायिका रेखा थापासँगको सम्बन्धपछि सार्वजनिक भएको हो तर रेखा उनको तेस्री श्रीमती थिइन् । पहिलो विवाह सामान्य रुपमै भएको थियो ३४ वर्षअघि हेमा ओझासँग । आठ वर्षपछि सो सम्बन्ध टुट्यो । त्यसपछि उनको वैवाहिक यात्रा सुरु भयो नायिकाहरुसँग ।
‘बिहे पनि नाटकजस्तो भइदियो छवि दाइलाई,’ नाम नलेखिदिने शर्तमा छवि निकट एक फिल्मकर्मीले भने, ‘सायद अर्को फिल्म चलाउनका लागि नभनेका होलान् ! अर्को फिल्मको रिलिजपछि चाहिँ भन्लान् कि ! ’